Ukukhuthaza i-Akhawunti Yomthengisi - I-Aplus Global Ecommerce
Ukukhuthaza Ukuthengisa ebhizinisini le-e-commerce ngumdlalo webhola ohluke ngokuphelele kunakwibhizinisi elingaxhunyiwe ku-inthanethi. Kusuka empendweni yamakhasimende esobala futhi eyiqiniso yokuba nebhokisi lokuthenga, kunezici ezahlukahlukene zokumaketha online eziyinselele impela. Ngaphezu kwalokho, ukuncintisana okunzima okuvela emabhizinisini amasha avelayo kwenza le ndlela ibe yingozi. Isici esiguqukayo sezimakethe eziku-inthanethi sidinga izindlela ezintsha nezindlela ezintsha zokukhula okuzinzile kokuthengisa. Ngaphezu kwalokho, imithetho enkundleni ye-e-Commerce iyaqhubeka nokuguquka ngobuchwepheshe obusha sha kanye nokwanda okusheshayo kwamakhasimende. Kuzo zonke lezi zizathu amabhizinisi ngokuvamile adinga ukuxhaswa ukukhulisa ukuthengisa nokwenza inzuzo
Osomaqhinga bokuthengisa nokumaketha ku I-Aplus Global Ecommerce banekhono ekufukuleni ukuthengiswa kwezinkampani eziningi ze-e-Commerce ngeminyaka yabo yokufunda emkhakheni. Sisiza ama-akhawunti e-Amazon akhuphule ukuthengisa ngokusiza kule mikhakha:
Ukunqoba ibhokisi lokuthenga
Ukusebenziseka kokuqukethwe kwekhasi lomkhiqizo
Intengo nokwenza isaphulelo
Amathiphu okuphatha amakhasimende
Lezi zinkambu yizinto ezinkulu ezinquma ukuthengiswa ebhizinisini. Ukulawula lezi zinto kungaba yithuluzi elinamandla lokulawula ukuthengisa futhi.